Nhau - Chii chandinofanira kutarisisa kana ndichiongorora matangi emvura e cryogenic?
Cryogenic mvura yekuchengetedza tangi yekuongorora yakakamurwa kuita yekunze yekuongorora, yemukati yekuongorora uye yakawanda-yakaomesesa yekuongorora.Iyo periodic yekuongorora ye cryogenic yekuchengetedza matangi ichatemwa zvichienderana nehunyanzvi mamiriro ekushandiswa kwematangi ekuchengetedza.
Kazhinji, kuongorora kwekunze kunoitwa kamwechete pagore, kuongorora kwemukati kunoitika kamwe chete pamakore matatu, uye kuongororwa kwakasiyana-siyana kunoitika kamwe chete pamakore matanhatu.Kana iyo yakaderera-kupisa yekuchengetedza tangi ine hupenyu hwebasa hweanopfuura makore gumi nemashanu, kuongorora kwemukati nekunze kunoitwa makore maviri ega ega.Kana hupenyu hwebasa huri makore makumi maviri, kuongorora kwemukati nekunze kuchaitwa kamwechete gore negore.
1. Kuongorora kwemukati
1).Kunyangwe paine kupfeka kunoparadza mukati memukati uye mugodhi wekuchengetedza tangi, uye kana paine makatsemuka mumusono we welding, nzvimbo yekuchinja yemusoro kana dzimwe nzvimbo uko kushushikana kwakadzika;
2).Kana paine ngura panzvimbo yemukati nekunze yetangi, kuyerwa kwemadziro akawanda kunofanirwa kuitwa pamativi anofungidzirwa.Kana iyo yakayerwa madziro emadziro iri pasi peyakagadzirwa diki madziro ukobvu, kusimba kwesimba kunofanirwa kuongororwazve, uye mazano ekuti inogona kuramba ichishandiswa uye inobvumidzwa yakakwirira yekushanda kumanikidza inofanira kuiswa pamberi;
3).Kana madziro emukati etangi aine hurema hwakadai se decarburization, kusagadzikana corrosion, intergranular corrosion uye kuneta kwakatsemuka, metallographic kuongorora uye kuomarara kwepamusoro kuyerwa kuchaitwa, uye gwaro rekuongorora richaendeswa.
2. Kuongorora kwekunze
1).Tarisa uone kana iyo anti-corrosion layer, insulation layer uye nameplate yemidziyo yetangi yekuchengetera yakamira, uye kana zvinhu zvekuchengetedza nemidziyo yekudzora yakakwana, ine hanya uye yakavimbika;
2).Kunyangwe paine kuputika, deformation, kupisa kwenzvimbo, nezvimwewo pamusoro pekunze;
3).Kunyangwe musono wepombi yekubatanidza uye zvikamu zvekumanikidza zviri kubuda, angave mabhaudhi ekusungirira akasimba, kana hwaro huri kunyura, kurereka kana mamwe mamiriro asina kujairika.
3, Kuongorora kwakakwana
1).Ita ongororo isina kukanganisa pane main weld kana shell, uye kureba kwenzvimbo cheki kuchave 20% yehurefu hwese hweweld;
2).Mushure mokupfuura kuongorora kwemukati nekunze, itai hydraulic test pa 1.25 nguva yekugadzira dhizaini yetangi rekuchengetedza uye muedzo wekudzivirira mhepo pane dhizaini yekugadzira tangi yekuchengetedza.Muchiitiko chekuongorora chiri pamusoro, tangi yekuchengetedza uye welds yezvikamu zvose hazvina kudonha, uye tangi yekuchengetedza haina kuoneka kusingaenzaniswi deformation sezvainokwanisa;
Mushure mekuongororwa kwetanho rekuchengetedza tangi yakaderera, mushumo unofanirwa kuitwa pakuongororwa kwetangi rekuchengetedza, zvichiratidza matambudziko uye zvikonzero zvinogona kushandiswa kana kuti zvinogona kushandiswa asi zvinoda kugadziriswa uye hazvigone kushandiswa.Chirevo chekuongorora chinofanira kuchengetwa pafaira kuitira kugadzirisa uye kuongororwa mune ramangwana.